Window XP « i-Collection
ဘယ်ဘက် panel မှာ “HEYCURRENT USER” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ အဲဒီထဲ ကမှ “control panel” ကို ထပ်ရွေးပါ။ “Control panel” ထဲကမှ Desktop ကို ရွေးပါ။ ညာဘက်အကွက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ “Menushowdelay” ကို Right click နှိပ်ပါ။ Modify ကိုရွေးပြီး Value ကို “0” ထားပါ။ ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Restart ပြန်လုပ်ပါ။
– Decimal value ကို “1” ပြောင်းပေးပါ။
– ‘Performance’ မှာ ‘setting’ ဆိုတာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ setting ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ‘Adjust for best performance’ ကို ရွေးချယ်ပါ။
– အခုန တည်ဆောက်ထားတဲ့ ‘Application'(New Floder)’ ဆီကို ညွှန်းပေးပါ။
– နာမည်မှာ ‘shutdown-s-to’ လို့ အမည်ပေးပါ။
– Display properies box ကျလာရင် ‘screen saver tab’ ကို ရွေးချယ်ပါ။
All is good. I like to see your page. Please try to be better. I am on your side.
Comment	by	hero | August 17, 2008 | Reply
အချိန်မရွေး အသုံးဝင်တဲ့ စာစုတခုဖြစ်ပါတယ်၊
Comment	by	၀င်းတင့်ဟန် | September 26, 2008 | Reply